Himalaya Dainik » सामाजिक सञ्‍जालका प्रतिक्रियाले तनावमा दीपा, भन्छिन्- नहेरौं भन्दा पनि आँखा गइहाल्छ
अहिले सामाजिक संजालमा बिवादमा रहेकी अभिनेत्री एवं निर्देशक दीपाश्री निरौलाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अभिनेता राजेश हमालबारे दिएको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरै उनी विरु द्ध खनिए । यही विषयमा सामाजिक सञ्‍जालमा आएका कमेन्ट र गाली गलौजका कारण अहिले उनको त नाव बढेको छ ।
‘राजेश हमाल हुनुहुन्छ र ? राजेश दाइ मात्र महानायक हुनुभयो । त्यहाँ प्रोड्युसर महानायक भएन, डाइरेक्टर महानायक भएन । राजेश दाइले मात्रै फिल्म खेल्नुभो । उहाँले फिल्म इन्डस्ट्रीलाई हाँकेर लानुपर्छ ।’
३/४ दिनदेखि दीपा घरबाट निस्केकी छैनन् । लगातार दुई हप्तासम्म आक्र मक शैलीमा सामाजिक सञ्‍जालमा मानिसहरु खनिन थालेपछि आफ्नो चिन्ता बढ्दै गएको उनी बताउँछिन् । हप्तौं यही विषयउपर खनिएको देख्दा आफू गलेको र डिप्रे सनको नजिक पुगेको उनले बताइन् ।
उनले अन्तवार्तामा भनेकी थिइन्, ‘राजेश हमाल हुनुहुन्छ र ? राजेश दाइ मात्र महानायक हुनुभयो । त्यहाँ प्रोड्युसर महानायक भएन, डाइरेक्टर महानायक भएन । राजेश दाइले मात्रै फिल्म खेल्नुभो । उहाँले फिल्म इन्डस्ट्रीलाई हाँकेर लानुपर्छ ।’ यो अन्तर्वार्ता प्रसारण भएपछि नै हमालका प्रशंसकले उनको कलाकारिता र उनले फिल्म उद्योगमा पुर्‍याएको योगदानको अवमूल्यन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । साथै दीपाश्रीले राजेशबारे टिप्पणी गर्दा अहं र दम्भ प्रदर्शन गरेको पनि उनीहरुको आ रोप थियो ।
‘अस्वभाविक पेलान भो । हो म शब्द चयनमा चुकेको हो । उहाँ मेरो मनपर्ने अभिनेता हो । मैले उहाँलाई चलचित्र क्षेत्रको खम्बा भनेर आदर पनि गरेको छु,’ उनले भनिन्, ‘कुरा अस्वभाविक किसिमले यसरी मोडियो । १० दिनसम्म यही कुरा ? किन यस्तो घट्ना बढेको हो मैले त तुरुन्तै भोलिपल्ट नै माफी मागेको हो नि ! अहिले मन अलिकति गलेको छ,’ उनले भनिन् । उनको अभिव्यक्तिमाथि आएका प्रतिक्रिया शिष्ट र तार्किकमात्रै छैनन्, अश्लि ल गा लीग लौज पनि उत्तिकै छन् ।
‘उहाँलाई भने कतिपय कारणहरु यस्तो हुँदो रहेछ दाइ त्यतिकै सुशान्तसिंहले आ त्मह त्या गरेनन् होला । मलाई त डिप्रे सनमा लग्नेखालको स्थिति भइसक्यो । त्यो स्थितिमा आइसके म त ।’
‘अशोक शर्मा दाइले फोन गरेर नआत्त है म छु भन्दा मलाई रुन आयो,’ दीपाले सुनाइन्, ‘उहाँलाई भने कतिपय कारणहरु यस्तो हुँदो रहेछ दाइ त्यतिकै सुशान्तसिंहले आ त्मह त्या गरेनन् होला । मलाई त डिप्रे सनमा लग्नेखालको स्थिति भइसक्यो । त्यो स्थितिमा आइसके म त ।’
कलाकार केदार घिमिरे (माग्ने बुढा)ले पनि फेसबुकमा ‘छ माया छपक्कै’को ट्रेलर पछि आएका कमेन्टले आफूलाई दोस्रो पटक डिप्रेसनमा पुर्‍याउन खोजेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सुरुमै करिब १२ सय नेगेटिभ कमेन्ट आए, ‘यीनीहरुको फिल्म फ्लप भैहालोस्’, ‘जोकरहरुको फिल्म कस्ले हेर्छ र ? आदी इत्यादि ।
यहि कारणले म झण्डै दोश्रो पटक डिप्रेसनमा गएको थिएँ,’ दीपाको विषय जोड्दै उनले लेखेका थिए । यसअघि ‘छक्का पञ्जा’को सुटिङ सकिएपछि आफू डिप्रेसनमा पुगेको उनले बताएका थिए । केदारमात्रै होइन अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र श्वेता खड्काले पनि डिप्रेसनलाई जितेका बताएका थिए ।
कहिलेकाही आशाविहीन हुँदा वा जे गर्दा पनि भएन भन्ने भाव मनमा रहिरह्यो भने पनि मानिस डिप्रेसनमा जाने मनोविद् पाठक बताउँछिन् । जेनरलाइज र एनालाइज गर्ने क्षमता कम हुँदा पनि कलाकार डिप्रेसनको शिकार हुने उनले बताइन् । ‘सेलिब्रेटी जहिले पनि दर्शकको सेन्टर अफ अट्रयाक्सन हुन खोज्छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर धेरैले चर्चित भइसकेपछि आफ्नो बारेमा नकरात्मक कुरा सहने क्षमता गुमाउँछन् ।
सँधैभरि राम्रो-राम्रो त पाइँदैन जीवनमा । जब जीवनमा नराम्रो कुरा आउँछ त्यसलाई स्वीकार्न नसक्ने भइसक्छन् । मेरो कुरा दर्शकलाई मन पर्न सक्छ, मन नपर्न पनि सक्छ भन्ने कुरालाई जेनरलाइज र एनालाइज गर्ने क्षमता कमैमा हुन्छ । एनालाइज र जनरालाइज गर्न सकिएन भने छिट्टै डिप्रेसनमा जान सक्छन् ।’
अभिनेत्री दीपाश्री पनि यो पीडाबाट आफू अझै दमदार हुनुपर्ने चुनौती थपिएको बताउँछिन् । ‘अतिरञ्जित गरेर कुनै पनि कुरालाई अगाडि बढाइन्छ भने त्यहाँ केही न केही घुसपैठ छ त होला,’ उनले सुनाइन्, ‘तर, अहिले मलाई धेरैजनाले सम्झाइरहनु भएको छ । अलिकति हौसला भएको छ । अर्को फिल्ममा अझ दमदार काम गर्छु भन्ने अठोट गरेकी छु ।’ स्राेतः कान्तिपूर